Linux wuxuu ku sii socdaa daruuraha Microsoft | Laga soo bilaabo Linux
Linux waxay kor ugu kacdaa daruurta Microsoft
Tina Toledo | | GNU / Linux, Noticias, Kuwa kale
Warka waxaa horay u xaqiijiyay Steve Ballmer; Microsoft go'aansaday inuu taageero Linux dusha sare ee daruurtaada Windows Azure iyada oo loo marayo abuurista mashiinno casri ah oo joogto ah.
Mahadsanid sii deynta soo socota ee dhismaha imtixaanka Hordhaca Teknolojiyada Bulshada, kuwa isticmaala ee doonaya in ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada nidaamka qalliinka Linux o Windows foomka "Raagaya" barnaamijkan adeeg ahaan waxay awoodi doonaan inay ku qabtaan dhibaato la'aan, sida laga soo xigtay macluumaadka ZDNet, tan waxaa lafilayaa inay dhacdo guga 2012 oo dhan.
Taageerada cusub ee MVS Joogtada ah ayaa sidoo kale u oggolaan doonta macaamiisha inay Microsoft orod SQL Server y Server SharePoint iyo in la sii fududeeyo habka loo dhaqaajiyo codsiyada jira Azure, halkii aad ka horumarin laheyd meel hoose.
Habkan oo ah Microsoft loolankiisa weligiis ah, Linux maahan wax tilmaam ah "qabow" laakiin kuwa tartamaya Azure, sida - Amazon EC2, horeba way u oggolaadeen iyo kuwa Redmond ma doonayaan inay ka yaryihiin.
Iskusoo wada duuboo, iyagu ma doonayaan inay lumiyaan macaamiisha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Linux waxay kor ugu kacdaa daruurta Microsoft
Haddii ay mar horeba ila muuqatay wax la yaab leh inay ahayd sadaqo ... aakhirka Windows wuu dhaqaaqayaa maxaa u dhaqaaqa ... Laakiin haye, haddii taasi faa'iido u tahay dadka isticmaala Linux, maxaa diidaya? In kasta oo aanan u malayn in dadka isticmaala Linux ay doortaan inay adeegsadaan adeegyada Windows ...
Hahahaha kuwa Hasecorp waxay leeyihiin shuban joogto ah Linux hahahaha pringaos liidata.
Sideed ku ogaanaysaa inay codsadeen midda ah "haddaadan ka adkaan karin cadowga ku soo biir"
Nin! Taasi waa haddii aysan khasaarin ... waxaa jira in ka badan oo isticmaaleyaal Linux ah (ama waxaan u maleynayaa) in, inkasta oo ay jiraan "dhibaatooyin" in adeegsiga nidaamka hawlgalka Linux-ku saleysan laga yaabo inuu keeno, gebi ahaanba waa bilaash, iyo in maanta, ay muujineyso!
Waxaan dhihi karaa in dhibaatadu aysan sii jiri doonin weligeed, qof walbana uu jabsado Hasefroch
Laakiin wali, waa wax aad looga xumaado in lagugu qabto (taasina way dhacdaa inta badan intaad moodeyso) oo xitaa ma awoodo inaad yeelato gidaar ama aad tagto si aad uga saarto ogeysiisyada dhibta leh. Sidoo kale, waa inaad bixisaa wax walba, oo haddii aad tahay qof khibrad u leh isticmaalkiisa, waxaad ka daalaysaa keygens iyo dildilaaca iyo hooyada samaysay dhammaantood
Haa maxaa dhacaya inay dhammaantood yihiin microsofteros? ajjaaja
Waxa dhacaya waa in qof wadiddiisa adag la xardhay waana inuu la jiraa guigaygan
Ilaa goorma markay tahay arrinta darawalka adag? Mid uun buu iibsaday, xitaa hadday tahay 20Gb, oo mar dambe cudurdaarka wuu uga tagi karaa. Ama halkii, maxay kuugu kacaysaa inaad ku isticmaasho xasuusta tooska ah Ubuntu qaab joogto ah si xogtaadu u kaydiso? Way ka fiican tahay in la isticmaalo Ubuntu marka loo eego Windows ... Mise waan qaldanahay?
Waad khaldan tahay, waxaa fiican inaad isticmaasho Windows marka loo eego Ubuntu. Hadday mid kale tahay, markaa waa laga yaabaa, oo wax fikrad ah sida loo sameeyo taas, marka laga reebo inuu jiro sawir ku yaal shaashaddayda oo aanan jeclayn inaan lumiyo ...
Sidoo kale, kumbuyuutarkani maahan mid aan leeyahay, markaa ma rakibi karo Linux.
Waan arki doonaa waxa ay mudan tahay in la hagaajiyo kumbuyuutarka maxaa yeelay waxay noqon kartaa wax ka badan diskiga adag
Windows-ka wuu ka xasilan yahay Ubuntu waana wax soo saar badan… .Runti, Ubuntu waxay iga dhigtay inaan lumiyo wax ka badan hal qof oo doonayay inuu u wareego Linux.
Fuck aniga kaliya maahan mar dambe. Isla waxbaa igu dhacay, wuxuu sameeyay waxyaabo la yaab leh sida shanqar yar ama Lucid oo i siiyay shaashadaha rakibaadda
Waxaan kuu hayaa war cusub:
Kuwa ka mid ah Muy way akhriyaan faallooyinkaaga BidcoWaxay shaqaaleeyeen sixirroole durba ficil ku dhejinaya biinanka laba boon oo voodu ah.
Noo Tina XD, saaxirad ma leh xD, waa inaan iska celino 😛
Waxaan idhi waxba kama dhihi doono Muy, waa talaabada aan kula macaamilay Ubuntosos
Waa maxay waali in la weeraro bogagga kale ... nin, in qof walbaa uu leeyahay ra'yigiisa ku saabsan bogagga kale, tifaftirayaasha, bulshada, maqaallada, iwm.
Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta ayan iyagu u qaadanayn shaqsi ahaan 🙂
KZKG ^ Gaara, Uma maleynayo kuwa Aad u xiiso badan u qaado wado qaldan ... bah! waxa ugu aaminka badan ayaa ah in xitaa aysan na aqrin doonin, laakiin waxaa jira maqaallo aad u xiiso badan oo iyaga iyaga ku saabsan halka ay wax ka qabtaan Linux: http://www.muyinteresante.es/tag/Linux
Ah sidoo qaladkeyga markaa, waa inaan moodayay inay ka hadlayaan Aad u Linux lol . _ ^ U
Taasi taasi waa caado qaar ka mid ah hareeraha halkan LOL !!
Da '(ma ka takhalusi doontid tan hahaha) pandev92 waxaanan tixraacayaa mid kale Aad
Si aan kuugu buuxiyo martida eraygaas koowaad 😀
Cabir naftaada wiil yar 😉
Si fiican u fahanto, markaan kuu sheego, sidaas kuma heli doontid, waad ogtahay inaysan ahayn inaad fuudhdo
Ciyaarta aniga ila socota waa mid ka duwan hahaha, anigu uma qaadanaayo waxa aad qorto mid dhab ah, ma ogi in qof kale sameyn doono wax la mid ah aniga iyo in kale.
Waxaa laga yaabaa in ra'yigeygu ka dhawaajiyay xoogaa ka xoog badan sidii dhabta ahayd, ha welwelin… waad ogtahay inaan ku qancay 😀
Ah ... iisoo qor emayl ku saabsan darbiyada aad ii soo dirtay, waxaan leenahay xeelad cusub oo qorayaasha 😉
Dagaal haku qaadin, taasi waxay ahayd beddelkii Avatar, oo sida hadda u badan dumar maxaa yeelay waxay sameysaa riwaayado badan ..
Waxaan u isticmaalaa maxaa yeelay waxaan ku maqanahay fasax waxaanan ciyaaraa isbeddellada iyo wicitaanka waajibaadka maalinta oo dhan: P.
Had iyo jeer taariikh isku mid ah…
Mar kasta oo Microsoft ay "dhaqaaqdo tab" waxay u sameysaa faa'iidadeeda, waa ganacsi waana u shaqaysaa sida oo kale.
Dhammaan waa wax caadi ah, miyaadan u maleyneynin?
Sidaas oo kale. Si kastaba ha noqotee, taasi waa wax sidoo kale adduunka ka jira GNU / Linux durba way dhacdaa, hase yeeshee qaarkeen:
si.-Ma dareemayno ama waxay na siineysaa isla.
b.-Ma dooneyno inaan ogaano laakiin waan ognahay horeyba waxaana isku dayeynaa inaan ku qarino qiima kasta ha lahaadee maxaa yeelay gudaha "GNU / Linux World" wax walba waa riyo midabkeedu ubax-kacay.
d.-Hore ayaan u ognahay waana dhahaynaa, laakiin kuwa ikhtiyaariga ah «b»Waxay leeyihiin waan waalan nahay.
Software-ka bilaashka ah waligiis ganacsiga ugama hor imaan, oo haduu gacanta ku soo qaado adeeg, sidaas ha ahaato.
Taas macnaheedu maaha inaan qirno ficillada sharci darrada ah, waa wax dhinaca kale ka dhacaya dhammaan qaybaha nolosha, mana u maleynayo inuu qofna rumaysan karo inaan kala duwanahay, waxaan ka mid nahay isku dhaqan iyo innaguba ma qumman yihiin.
Waa wax iska caadi ah, dhibaatadu ma aha ganacsiga, laakiin waa dabeecadaha shirkadaha qaarkood ee la xiriira barnaamijka softiweerka, in si ay lacagta u qaataan aysan u tixgelin fikradaha kuwa kale oo aysan u danaynaynin inay xaaraan sameeyaan
Xaqiiqdii waad saxantahay, laakiin dhibaatadu maahan in softiweerka bilaashka ah uu ganacsi yahay iyo inkale, xitaa waa inaadan su'aal kaqabin inaad la gorgortamayso softiweerka bilaashka ah iyo inkale, maxaa yeelay runti waa la qabtay taasna khalad ma ahan. Dhibaatadu waa ta tilmaamaysa Courage: nidaamka deegaanka GNU / Linux Horeyba waxaa u jiray dano gaar ah iyo loollan adag oo looga takhalusi lahaa "tartame" aan raaxo lahayn.
Dhibaatada halista ah waxay tahay ma aanan arag beel ka sii qeybsanaan badan tan isticmaaleyaasha GNU / Linux maxaa yeelay in badan oo ka mid ah waxay ka kooban yihiin isticmaaleyaal adag -waxa loogu yeero fanboys- in, wicitaankii ugu horreeyay ee dagaalka ee hoggaamiyaha distoorka jacaylkooda, ha ka waaban inaad soo bandhigto faaska dagaalka si aad ugu muujiso distoorka "Cadow".
Marar badan, laga soo bilaabo baloogyada badan ee Linux, Waxaan dhaleeceynaynaa dadka isticmaala Windows iyo, wixii ka sarreeya, kuwa ka mid ah macOS X iyaga ugu yeeraya "Maskaxda adkayso" si kastaba ha noqotee ma helno sabab haddii khilaafkii ugu dambeeyay iyo dhagxaanta dalxiiska ee ka soo horjeedda ciribtirka caanka ah runtii ay kicisay arrimo anshax ama suuqgeyn ah.
Ma aqaano haddii MacOsx ka fiican yahay iyo in kale, ka waran haddii aan idhaahdo PC-kooda ayaa fiican, anigu kuma qarash gareynayo euro si aan u iibsado nidaamka qalliinka, maaddaama aanan ciyaari karin ciyaaraha badankood, laakiin sida kuwa PC, chapo, adag waari kara oo indhahana leh.
Linux waa run, laakiin hey, uguyaraan waxay nolosha siisaa waxyaabo, haddii kale dhammaantood waxay noqon doonaan caajis.
Waxaan isticmaalay Mac OS X ilaa aan ka iibiyey Mac Mini, runtiina waxay tahay in Linux iyo Mac OS X ay aad isugu egyihiin, waxay umuuqataa doqonnimo inaad bixiso daaqa inay qiimo leeyihiin mooyee inaad tahay naqshadeeye garaaf ah maxaa yeelay xaq ma ahan .
Mac OS X waa BSD, intaa kabadan, ma yara
Waxa aad soo jeedineyso waxay mudan yihiin in si qoto dheer looga milicsado dabeecadeena.
Taasi waa su’aasha milyan ee dollar ah. Abuuritaanka wacyigelintu ma aha hawl fudud, waxaan tusaale u soo qaadan karnaa, laakiin wacyigelinta ...
Wax walbaa waa arrimo xagga waxbarashada ah, shaqaduna way noo dhigantaa kulligeen.
Laakiin yaanan ilaawin tusaalaha bulshada ee aan abuurnay. Tartanku waa aasaaska waxbarashadeenna, waa waxa ka dhigaya adduunka oo dhan inuu hoos u shaqeeyo
Hal ikhtiyaar ayaa ah in laquudiyo kuwa dhaqankaas leh (Canoni $ oft) laakiin waa xagjir, inkasta oo la iskudayo in lala wanaagsanaado waa doqonnimo
dabogal 92 y Courage:
Waxaan ahay isticmaale Mac laga soo bilaabo da'da toban jir, runti aabbahay wuxuu i siiyay midkii ugu horreeyay ee aan isticmaalo 1990-kii markii aan toban jirsaday, tan iyo markaasna waan isticmaalayay. Runtu waxay tahay inay yihiin PC-yo aad u adag -labada softiweer iyo qalabba- taasi aad iyo aad ayey u yar tahay, waana dhif.
Waan kugu raacsanahay in dhibaatadani ay nagu casuuntay fikir qoto dheer, marka hore si taas loo ogaado Linux waxaa jira distros oo ay abuureen oo u qaybiyeen shirkado leh taageero suuqgeyn ah, oo aan aheyn heerka Microsoft laakiin haddii ay isku mid yihiin xagga saamiga iyo, dhawaanahan, oo leh anshax isku mid ah. Tanina wax shaqo ah kuma laha tartan.
Hagaag, aniga miyuusigga wuxuu bilaabay inuu ku guuldareysto taasna waxay keentay dhibaatooyinkaas badan. Waxaan xasuustaa inuu i siiyay argagax kernel kaliya oo aan gelinayo pendrive ...
Waa inaad aragtaa boqolleyda wax walba
Waxaan qabaa a Mac Mini, laakiin anigu uma isticmaalo shaqada laakiin waxaan u adeegsanayaa qayb ka mid ah xarunta war-baahinta ee gaadhigayga, sidaa darteed waxay u adeegtaa oo keliya cunugga inuu daawado filimada ama dhageysto muusikada inta aan safrayno.
Waxaan ku isticmaalaa labada CD iyo USB sticks sifiican ayeyna iigu shaqeeyeen.
Waxaad dhahdaa: "Nidaamka deegaanka ee GNU / Linux dhexdiisa waxaa jira dano durba leh iyo loollan adag oo looga takhalusi karo 'tartame' aan raaxo lahayn." Ka dib markii aysan ahayn su'aal tartan, waad iga yara wareersan tahay, maxaa yeelay waxaad u wareejineysaa doodda dhinacyo kala duwan. Xitaa iyadoo sidaas ah, waan kugu raacsanahay.
Waxa dhacaya ayaa ah in arrinta aanan u arkin arrin tartan ah -kartida tartanka- laakiin tartan ahaan -dadka iyo / ama shirkadaha ku tartamaya suuq bixiya isla waxsoosaar-
Dunida oo dhan aad ayeynu u yaryihiin isticmaaleyaasha Linux, si aan isu tuurayno, haddii aan horey u haysannay aqlabiyadda tirada badan ee adeegsata win32 dibedda innaga tuuraya, waa maxay baahi.
Marka laga reebo in loo sheego ubuntoso aniga ima xumaynayso, waxay ii sheegeen waxyaabo ka sii daran oo ku saabsan isticmaalka Linux ama isku dayaya inaan barnaamij kula adeegsado aalado furan.
Man wax Ubuntoso looma isticmaalo dhammaan isticmaaleyaasha Ubuntu
My Desk Janaayo 2012 (KZKG ^ Gaara)